Ma dhab baa in Cumar C/rashiid ku lug lahaa heshiiska Imaaraatka Carabta saldhiga looga siiyey Berbera? | shumis.net
Home » Layaab » Ma dhab baa in Cumar C/rashiid ku lug lahaa heshiiska Imaaraatka Carabta saldhiga looga siiyey Berbera?
Ma dhab baa in Cumar C/rashiid ku lug lahaa heshiiska Imaaraatka Carabta saldhiga looga siiyey Berbera?
Siyaasiyiin caan ah oo ka soo jeeda Koonfurta Somalia ayaa la sheegay iney ku lug leeyihiin heshiiskii muranka badan dhaliyey ee dowlada Imaaraadka Carabta lagu siiyey Saldhiga Milateri ee ay ka dhisaneyso magaalada Berbera.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda dowladdii KMG aheyd ee Somalia Ismaaciil Hurre Buubaa haatana ka mid ah Xisbiga Mucaaradka ee Wadani ayaa sheegay in RW hore Cumar C/rashiid uu ku lug lahaa heshiiskaas.
Buubaa oo saxaafada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa kashifay in Cumar C/rashiid qeyb ka ahaa heshiiskaas, isagoo xusay in Somaliland oo kaliya aanay heshiis geli Karin maadaama aysan aqoonsi dowladnimo ka heysanin caalamka.
“Waxaanu iska garanaynaa in dawlad kasta oo Xamar timaada ay aragtideeda bixinayso, waayo kuwii markii horeba u ogolaaday waxay ahayd dowladdii hore ee Cumar Cabdirashiid, waana laga war hayey, wax la isla ogaa bay ahayd, maaha wax Dawladda Xamar aanay ka war hayn, ee yaan dadka been loo sheegin”ayuu yiri Ismaaciil Buubaa.
Masuuliyiin ka tirsan dowlada Soomaaliya ayaa horey loogu eedeeyey iney gacan ka geysteen heshiiska Somaliland ay la gashay imaaraatka Carabta.
Raisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid oo dhowr mar booqday wadanka Imaaraatka Carabta ayaan illaa hadda ka jawaabin eedeyntan cusub ee loo jeediyey.
Xisbiga Mucaaradka Wadani ayaa si weyn uga soo horjeeda heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka ee saldhiga Milateri kaga dhisanayaan Garoonka diyaaradaha Berbera, .
Dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ayaa dhowaan muujisay sida aanay ugu qanacsaneyn Saldhiga Imaaraadka Carabta ka dhisaneyso Berbera, waxaana Madaxweynuhu arrintan uu kala hadlay dowladda Sacuudiga oo saaxib dhow la ah Imaaraadka.
Title: Ma dhab baa in Cumar C/rashiid ku lug lahaa heshiiska Imaaraatka Carabta saldhiga looga siiyey Berbera?